UE BOOM 2 ongororo: ongororo ine hunhu, mutengo uye maonero | Gadget nhau
UE BOOM 2 wongororo: dhizaini dhizaini yemhando yepamusoro uye inodzivirira kwazvo isina waya mutauri
Alfonso De Frutos | | Vatauri, Reviews
Ekupedzisira Nzeve ndeimwe yemakambani akakosha muchikamu. Vatauri varo vanobva mutsetse weBHOOM vakashamiswa nedhizaini yavo dhizaini, kuramba uye mhando inzwi. Iye zvino ndinokuunzira yakakwana UE BOOM 2 mutauri wongororo, yazvino modhi yechigadzirwa uye izvo zvinofadza vanoda mimhanzi.
Iye anotsiva kune UE BOOM maficha a simba mumatauri ako anowedzera makumi maviri neshanu muzana zvichienzaniswa neyakadarika modhi, pamusoro pekuve nebluetooth renji inosvika pamamita makumi matatu, kuti ugone kuitora kupi. Uye kana isu tichifunga nezve kuti inoshingirira nekuvhunduka uye kudonha, kuwedzera pakuve uine IPX7 chitupa Kugona kuinyudza mumvura pasina kunetseka, isu tine pamberi pedu imwe yeakanakisa maspika masipika pamusika.
1 UE BOOM 2 ine inoyevedza uye inokatyamadza dhizaini
2 Inonakidza yemhando yepamusoro kubva kune masipika anotakurika
2.1 UE BOOM 2 kuita
4 Pfungwa dziri mukati
5 Pfungwa dzinopesana
UE BOOM 2 ine inoyevedza uye inokatyamadza dhizaini
Chinhu chekutanga chaunoona paunotanga kutora iyo UE BOOM 2 ndechekuti isu tiri kutarisa chigadzirwa yakanyatsovakwa uye iyo exudes mhando kubva kune yega yega pores ayo. Mutauri ane chifukidzo cherabha chinoputira chakakomberedza mudziyo, chichiita kuti chinakidze kubata uye nekupa kubata kwakanaka. Nenzira iyi, kunyangwe iyo UE BOOM 2 ikanyorova, unogona kuitora usina kunetseka nezvayo kutsvedza.
Yayo diki saizi, ine dhayamita ye67mm uye kukwirira kwe180mm ivo vanoita iyo UE BOOM 2 chaizvo inobatsira uye inogona kutorwa chero kupi. Simbisa chimiro chayo chakatenderedza chinobata kubata kwechigadzirwa. Chekupedzisira, ayo magiramu 548 ehuremu ndiyo icing pane keke yechigadzirwa chakagadzirirwa kuitora chero kupi.
Pamusoro peiyo UE BOOM 2 ndipo pane iyo mutauri pane / bhatani bhatani, kuwedzera kune rimwe bhatani diki iro rinoshandiswa kufananidza iyo UE BOOM 2 nechero mudziyo weBluetooth.
Tatova kumberi tinowana iyo vhoriyamu kudzora makiyi. Nzira yavo inopfuura yekurevesa uye ivo vanopa inobudirira kwazvo kunzwa kune iyo yekubata, uchiziva nguva dzese kana iwe wakavamanikidza. Nzvimbo yayo yakasununguka uye inoshanda. Rangarira kuti aya masipika akagadzirirwa kutorwa chero kupi uye kusatombobata foni yako kumahombekombe kusimudza, kudzikisa vhoriyamu kana kushandura nziyo ipfungwa yekufunga nezvayo. Gare gare ini ndichataura nezve iri basa.
Chekupedzisira, pazasi pe UE BOOM 2 ndipo panowanikwa chiteshi micro USB kubhadharisa chishandiso, pamwe ne 3.5mm odhiyo kuburitsa uye mhete diki yekubata maspika pane chero rutsigiro. Muchidimbu, iyo UE BOOM 2 ine dhizaini hombe iyo ichatibvumidza kuti tiende nayo chero kupi. Unoda kuenda kunokwira bhasikoro here? Sungirira mutauri pachiteshi chemvura uye unakirwe nemumhanzi.
Ini pachangu Ndakavashandisa pamahombekombe, kutsika muchikepe, neigwa uye zuva rega rega mushawa(vavakidzani vangu vanondivenga zvakanyanya). Ehezve, inofanirwa kutariswa kuti iyo UE BOOM 2 inonyura saka ini ndinokurudzira kuti, kana uchizoishandisa mumvura, sunga chishandiso kune vest yako kuburikidza nemhete iripazasi, saka iwe uchaponesa zvisina basa zvinotyisa.
Inonakidza yemhando yepamusoro kubva kune masipika anotakurika
Dhizaini yeUE BOOM 2 yakakwana: mudziyo wakareruka, wakasununguka kupfeka uye nekubata kwakanaka kuti ushandiswe mune chero mamiriro, asi mutauri uyu anonzwika sei? Ini ndato kutokuudza kuti, uchifunga zviyero zvaro, ndeimwe yeakanakisa maspika masipika andakaedza. Ndisati ndapinda munyaya iyi, ndinokusiya nehunyanzvi hunhu hweIE BOOM
UE BOOM 2 kuita
360 degree isina waya mutauri
Isina mvura (IPX7: inosvika pamaminetsi makumi matatu uye kudzika kwemamita 30) uye kusagadzikana kusingafadzi
Maawa gumi nemashanu ehupenyu hwebhatiri (Nguva yekuchaja: 15 maawa)
Bluetooth A2DP ine 30 mita renji
Wireless app uye inogadziridza
3,5mm odhiyo kunze
Frequency renji: 90 Hz - 20 kHz
Pepa tine zvimwe vatauri vakakwana kwazvo. Uye kana zvasvika pakushandisa ivo vari nani. Pakutanga kwechinyorwa ini ndakakuudza kuti aya UE BOOM 2 ane 25% simba rakawanda kana uchienzaniswa neyekare modhi uye, mushure mekuyedza ese ari maviri mamodheru, zvave pachena kuti mugadziri haasi kuwedzeredza.
Hazvina mhosva kuti vatauri vanonzwika zvine mutsindo zvakadii, kana mhando yemutinhimira iri shoma, simba rayo haribatsiri. Sezvineiwo UE BOOM 2 mutauri unonzwika chaizvo, ichipa yakajeka, yemhando yepamusoro kurira.
Izwi racho rakanyatsoenzana, rinosvika pa yakanaka chaiyo kurira mhando kusvika 90% yesimba izere. Kubva ipapo, kumonyoroka kushoma uye ruzha runooneka, asi ini ndakakuudza kare kuti nesimba rinoshamisa rinopihwa nemutauri uyu, ruzhinji rwevashandisi havazodi kuwedzera vhoriyamu yemutauri kupfuura 80%. Kunyangwe yekumisikidza chiitiko chebato kana bhengi, 70% inopfuura zvakakwana.
Su Bluetooth Low Energy ine huwandu hwemamita makumi matatu, Kukubvumidza iwe kushandisa maspika pane chinopfuura chinokwana chinhambwe. Kumba, ndasiya foni yakabatana nezve 15 metres kure, nemikova miviri pakati, uye mutauri akashanda zvakakwana.
La UE BOOM 2 kuzvimiririra maawa gumi nemashanu ekushandisa. Pano ndanyatsosvika maawa gumi neshanu nevhoriyamu iri pa15-30% asi ndichiisa tsanga uye ndichiisa mutauri pa40% simba kuzvitonga kunodonhedza kusvika kumaawa gumi nemaviri, chimiro icho chichiri chakakosha uye chakaringana. Uye zvakare, mutauri anopinda muhope yekurara mushure mechinguva pasina kuishandisa, saka hatifanire kunetsekana nekuimisa uye kudzima nekuti kuburikidza nechishandiso tinogona kumisa kana kudzima iyo UE BOOM 80 sekuda kwedu. Uye bhatiri inobhadharisa mumaawa anopfuura maviri chete, saka hapana chekushoropodza mune izvi.
Rutsva runonakidza runouya ne kudzora kwemaitiro; semuenzaniso, kana tichisimudza iyo UE Boom 2 neruoko rumwe uye tichirova chikamu chepamusoro chemukurukuri neruoko rweumwe ruoko, isu tinombomira kutamba kusvikira tabata iyo yepamusoro chikamu zvakare. Uye nekubata kaviri nekukurumidza isu tichafambisira mberi rwiyo. Nenzira iyi hatizofaniri kubata foni zvachose kana tichida kuenda kuburikidza nenziyo.
Vakomana kuEkupedzisira Nzeve vakagadzira iyo Chikumbiro chakazara chaizvo icho chinotibvumidza kudzora akasiyana mabasa eUE BOOM 2 kuburikidza nefoni yedu. Iyo app, inowirirana nezvose zviri zviviri Android uye iOS zvishandiso, Inokutendera iwe kuti uone iyo bhatiri nhanho, mutauri vhoriyamu pamwe nezvimwe zvakanyanyisa kuziva ruzivo senge mukana wekufananidza akati wandei mafoni panguva imwe chete kuitira kuti yega yega iridze mimhanzi yavanoda. Isu tinogona kunyange kubatanidza akati wandei UE BOOM kana UE Roll vatauri kuti vateerere kumimhanzi pane akati wandei madhizaini panguva imwe chete! Iri basa rakandishamisa sezvo richikubvumidza iwe kukwirisa yakanaka yakanaka kurira sisitimu nemawadhi mashoma emidziyo.
Imwezve inonakidza nhoroondo inouya ne IPX7 chitupa iyo inopa iyo UE BOOM 2 kuramba kwemvura, kugona kunyudza mudziyo kusvika pamamita 1 pakadzika kwemaminitsi makumi matatu. Ndakayedza nechando nemvura uye mutauri achiri kushanda nemazvo. Ehezve, sekutarisirwa, pasi pemvura havazorira sezvo chiratidzo chebluetooth chakarasika. Zvakareruka sekutora iyo UE BOOM 30 kubuda mumvura kuti uenderere mberi nekunakidzwa nemhando yaro yekuteerera.
Kune izvi, iyo UE BOOM 2 ine mamwe makapeti anovhara mabudiro, aya anofanirwa kunge akavharwa zvakanaka kuti mvura isapinda, asi usazvidya moyo kuti kunyangwe ichinaya zvakadii, chando kana kutinhira, unogona kushandisa mutauri pasina matambudziko. Chakavanzika chako? UE BOOM 2 haina chero simbi zvikamu.
Kunyangwe kubva kuEkupedzisira Nzeve ivo vasina kuda kupa iyo UE BOOM 2 nechero chiuto chechiuto, ndinofanira kutaura izvozvo chishandiso chinonyatsopokana nekukanganiswa uye kudonha. Panguva yemharidzo ndakaona vanhu vakati wandei vachikwira pamusoro kuratidza kushora kwavo uye modhi yangu yadonha kashoma, ndinenge ndakaomarara kana ndiri akatendeka, uye haina kukuvara, saka ndinogona kukuvimbisa kuti UE BOOM 2 mutauri wakaoma.
El UE BOOM 2, iyo inowanikwa mumhando dzakasiyana siyana saka unogona kusarudza iyo modhi yaunofarira zvakanyanya, ine mutengo wepamutemo we199 euros, kunyange uchikwanisa kuitenga izvozvi kuAmazon nekudzvanya apa kwema 133 euros chete. Chibvumirano chaicho kana tikatarisa mikana yeiyi inoshamisa isina mvura isina bluetooth mutauri.
Kudzokorora kwe: Alfonso De Frutos
Pfungwa dziri mukati
Mvura, kuvhunduka uye kudonha kusagadzikana
Inonakidza kwazvo kukosha kwemari
Kunyangwe iri kutengeswa, mutengo wayo wepamutemo we200 euros unogona kudzoka kumashure
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Mufananidzo uye kurira » Vatauri » UE BOOM 2 wongororo: dhizaini dhizaini yemhando yepamusoro uye inodzivirira kwazvo isina waya mutauri
Ndine UEBOOM uye zvese zvakanaka chaizvo asi kana bhatiri remukati raanenge raenda, taura zvakanaka mutauri. Iyo kambani yakandiudza kuti havana mabhatiri ekutsiva ... uye pasina bhatiri mutauri haashande kunyangwe ukabikwa mune yemagetsi magetsi. CHIRONGWA CHINOGADZIRIRA: mutauri anogara chero bhatiri riripo mukugona, kubva panguva iyoyo, mumarara.
Ricardo Reyes akadaro
Ini ndakatenga iyo UE Boom 2 uye inhema kuti inogara maawa gumi nemaviri pa12% vhoriyamu, yakarebesa inogara maawa maviri inova nenjodzi, pakupedzisira ndaifanira kuichinja kuita JBL, zvingave zvakanaka kana zvigadzirwa zvigadzirwa ndezvechokwadi uye zvakaedzwa
Pindura Ricardo Reyes
Asi iwe unofunga kuti vanhu ava vanoedza chaizvo zvigadzirwa? Naive Aya mavara anowanda paInternet uye anozvidaidza kuti "nyanzvi", "vanoda tekinoroji" kana chero chimwe chirevo chinokatyamadza vakazvipira kutevedzera nekunamatira zvinoburitswa, vachizvishongedza zvishoma uye vachizivisa zvakanyanya, mune tariro isina maturo iyoyo mhando dzinovapa zvigadzirwa zvemahara zvekushandisa kwavo uye kunakirwa.
Semuenzaniso, ichi chinyorwa. Hapana painoratidza simba chairo remukurukuri kana kuti kusvetuka pakati pezviyero zvevhoriyamu kwakakura kwazvo.
Zvakanaka, tarisa, ndinayo uye ndinosimbisa kuti inopedza anopfuura maawa gumi pa10 uye 70, ndiko kuti izvo zvako zvichave zvisina kugovana. mucherechedzo waita basa rechikoro zvakanaka.nechigadzirwa chako kwete senge jbl kupfuura vamwe chete.
Zvisinei, ramba uchienda nejbl, iyo isingazopfuure anopfuura maawa zana, zvirokwazvo haizotakuri kana kubhadharisa bhatiri kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita.
Pindura kuna Shefu
Albert mosquera akadaro
Ini handisati ndanzwisisa kuti ichi chiratidzo, icho chakanyanya kuzvipira mukugadzira PC mbeva, chave chiri pakati peanonzi "akanakisa mabhaisikopu ekutaura pamusika. Ivo vanogara vachionekwa mu "kuongorora" zvine hukasha hwakadai. Marii iyo Logitech inobhadhara kuti ive yakazvimiririra? Zvinokwanisika sei kuti marara aya evatauri, nekushomeka kwakazara kwedudziro uye kushungurudzwa kwemabhasi, anokwenya mafudzi neHarman Kardon, Vifa, Bowers & Wilkins, JBL kana Bang & Olufsen? Ndiko kutumidza mazita mashoma mashoma epamusoro-epamusoro ekurira nyanzvi.
Pindura kuna Albert Mosquera
Israel Nuts akadaro
Ini ndichangotenga UEboom2 uye ndine kusava nechokwadi nezvenguva yacho, inogara zvishoma, kwete kunyangwe mushure maawa matatu. Chero nyanzvi yekundibatsira? Ndinoda kuziva kana mumwe munhu akashandisa garandi uye nenzira ipi.
Pindura Israeri Nuts
Seagate inotaura nezve yayo nyowani 14 uye 16 TB yakaoma dhiraivha
Megaupload 2.0 inononoka, nekuda kweiyo Canadian Stock Exchange